Qasha Ihlathi, Ikhabhinethi Efihliwe e-Fruška gora
Velika Remeta, Vojvodina, i-Serbia
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Jozef
Indawo ephelele yokubaleka yomndeni noma abangani. Uhlukaniswe ngokuphelele, ufihlwe ehlathini, uqinisekisa ukuthi uzoba nesikhathi esinokuthula nesiqinisekile nabathandekayo bakho kude nempilo yedolobha ephithizelayo. Noma kunjalo, hhayi kude kangako, ukugibela amaminithi angu-20 kuphela ukuya e-Novi Sad, noma Phuma emkhosini, kanye nemizuzu engu-45 ukuya e-Belgrade. Sinikeza i-Home Cinema, imidlalo yebhodi kanye ne-Indoor Fireplace izinsuku zemvula. Indawo yokucima umlilo yangaphandle, indawo yomlilo, amaswing alengayo kanye nenkundla yokudlala yezingane kuzokwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki. Ihlathi likulindile, lihlole!
Ikhabethe lethu lenziwe ngokhuni ngaphakathi nangaphandle. Sibeka izingalo nemiphefumulo yethu ekulungiseni indlu. Senze konke esikusha sisodwa. Sapenda kabusha, salungisa kabusha, sahlobisa kabusha, senza konke esasikwazi ukuthi kanjani.
Kuyindawo yamaholide yedolobhana laseVelika Remeta, elitholakala entabeni yaseFruška gora. Ikhabethe lethu liseduze ne-Spring Ubavac, i-pony ranch, i-Velika Remeta Monastery, i-Pijaca zdravlja (imakethe yokudla okunempilo), Indawo yokudlela yase-Šumski raj.